Piroojektii Wikshinarii ( poortiimantiin “wiki” fi “kuusjechaa”) afaanota hundaan qabiyyee kuusjecha banaa uumuufi. Wikshinariin jalqabaa Afaan Ingiliffaa, Biraayon Vibber tiin Mudde 12, 2002 uumame ture. Afaan Faransaayi fi Afaan Poolaandi waggaa tokkoo booda, Amajjii 22, 2004 itti aananii uumaman. Caamsaa 1, 2004, Tim Starling qooqa Wiikiipiidiyaan jiru hundaan Wiikshinarii jalqabsiisee, Wiikshinarii haaraa 143 argamsiise. Fuulli “Gaaffii hayyama Wiikshinii” jedhu Caamsaa 2 kan uumame yoo ta’u, akka bulchitoonni gaaffii hayyamaa fayyadamtoota pirojektoota haaraa kana irratti qaqqabummaa bulchaa barbaadaniin dabaluu danda’an ilaaluu danda’aniif. Kunis boodarra “Gaaffii hayyamaa” waliin walitti makame.
Tarreen koodii ISO Wikippiidiyaa irratti argamuu danda'a.
1 Garee Fayyadamtootaa fi marii
2 Jijjiirama dhiheenya kana Wiikshinarii hundaaf
4 Miira qubee guddaa
Garee Fayyadamtootaa fi marii
Tuutni fuula afaanota hedduu Meetaa irratti Wiikshiniif kan kennamee fi Garee Fayyadamtoota Wiikshinii Guddaa tiin kan deeggarameedha.
Jijjiirama dhiheenya kana Wiikshinarii hundaaf
Gara Meta:Jijjiirama-dhiyeenyaa/Afaanota hunda tti geeffame.
Gabatee armaan gadii keessatti, “Gaarii” jechuun lakkoofsa fuula qabiyyee yoo ta’u, “Waliigalaa” jechuun fuula hunda kan qajeelchuu, fuula haasaa fi kkf dabalatee (Forum archive) “Wiki” links to wiktionary fi maqaa afaanichaaf gabaabduu Wiikiipiidiyaatiin mallatteeffameera.
Madda Alaa, ulaagaa kamiinuu daayinamiikiin sassaabamu, sa'aatii 24 hunda cronjob'n of haaromsa.
Gabatee armaan gadii guyyaa guyyaan bot tokkoon haaromfama. Yeroo dhumaaf kan fooyya'e: 6 Adooleessa 2022.
Miira qubee guddaa
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wiktionary/om&oldid=23350105"
This page was last edited on 31 May 2022, at 19:17.